नरोकिएको दल विभाजनको शृङखला | Today Express
नरोकिएको दल विभाजनको शृङखला
निश्चय पनि आज मधेस र मधेसी जनताले जे जति अधिकार र अवसर पाएका छन्, त्यसको सुत्रधार स्व.गजेन्द्र नारायण सिंह (गज्जु बाबु) नै हुन् । ‘राज्य सत्तामा समान साझेदारी नभएसम्म कुनै पनि समुदायलाई न्याय प्राप्त हुन सक्दैन’ भन्ने मुल मन्त्रका साथ नेपाल सदभावना पार्टी (नेसपा) स्थापना गरेर यही मुल मन्त्र साकार पार्न र स्थापित गराउन गज्जु बाबु जीवनपर्यन्त लागि परे । यद्यपि बहुदलिय व्यवस्थाको पुनस्थापन पश्चात भएको पहिलो आम निर्वाचनमा उनको पार्टीले बलियो उपस्थिती देखाउन नसकेता पनि जे जति सांसदहरु बिजयी भएर संसदमा पुगेका थिए । गज्जु बाबुले आफ्नो दर्बिलो उपस्थिती प्रस्तुत गर्दै मधेस र मधेसी जनताको समान अधिकार र अवसरका लागि आफ्नो आवाज बुलन्द गरिनै रहे । तर २०५८ साल माघ १० गते गज्जु बाबुको निधन भयो । नेसपाको नेतृत्व हत्याउन जालझेल सहित तामाम किसिमका हतकण्डाको खेल प्रारम्भ भयो, जसका कारण नेसपा र गज्जु बाबुले प्रारम्भ गरेको आन्दोलन र मधेस मुद्धा नै कमजोर हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न, शंका, उपशंका मधेसमा व्याक्त भयो ।
जब २०६२÷०६३ को दोस्रो जन आन्दोलन पश्चात भूमिगत भएर दश वर्षसम्म जनयुद्ध सञ्चालन गर्दै आएको नेकपा माओवादी जनयुद्ध समाप्तीको घोषणा गर्दै र शान्तीपूर्ण राजनीतिक अवतरण गर्दै मुलधारको राजनीतिमा समाहित हुन पुग्यो । उता उपेन्द्र यादवले ०६३ माग ४ गते सप्तरीको कञ्चनपुरस्थित पूर्व–राजमार्गमा चक्का जाम गरेर मधेस आन्दोलनको उदघोष गरे । जब यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम (मजफो) नेपालको आन्दोलनले उभार लिन नसकिरहेको बेला सिरहा जिल्लाको लहानमा माघ ६ गते १६ वर्षे किशोर रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भयो तब फोरम नेपालको आन्दोलनले उग्र रुप लियो । तराईका २२ वटै जिल्लाहरुमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरोमको आन्दोलनको आधी प्रचण्ड बेगले चल्न थाल्यो । आन्दोलनको प्रचण्ड बेग देखेर तत्कालिन सत्तापक्ष र मुलधारका पार्टीहरु अतालिनु स्वभाविक थियो ।
तर त्यही बेला महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पनि मधेस आन्दोलनमा प्रवेश ग¥यो । नेपाल सदभावना पार्टी त उसै पनि आन्दोलनमा थियो । यदि महन्थ ठाकुरको तमोलोपा मधेस आन्दोलनमा त्यसबेला प्रवेश नगरेको भए उपेन्द्र यादवको मजफोले तराईका अधिकांश स्थानमा बिजय हासिल गर्न सक्थो । तर ठाकुरको प्रवेशले उपेन्द्रको आँधी मत्थर बनाउन सहयोग गरेको हुँदा भनेजति स्थानमा मजफोले बिजयी हासिल गर्न सकेन, तमोलोपा र सदभावना पार्टीले पनि पहिलो संविधानसभामा राम्रै प्रर्दशन गरे भने यी दुई पार्टीले मजफोको भोट काटेका कारण थोरै मतको अन्तरले तराई मधेसमा नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बिजयी हासिल गरेको त्यसबेला चर्चाको विषय थियो । त्यसबेला मजफो र तमोलोपामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चिरपरिचित र प्रभावशाली नेताहरु प्रवेश गरेका थिए ।
०६३ सालमा चलेको मधेस आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेको थियो । जुन आन्दोलनमा दर्जनौ मधेसीहरु सहिद भएका थिए । १९ दिनसम्म तराई मधेस ठप्प थियो । काठमाडौंमा दानापानी बन्द भएपछि र आन्दोलनले उग्ररुप लिए पछि बाध्य भएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उपेन्द्र यादवसँग आठ बुँदे सहमति ग¥यो । तर एक वर्ष बित्दा पनि सहमति कार्यन्वयन नभएपछि २०६४ फागुन महिनामा करिव तीन साता लामो दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो । यो बेला पनि धेरै सहिद भए । अन्ततः प्रधानमन्त्री कोइराला पुनः २० बुँदे सहमति गर्न बाध्य भए ।
त्यसपछि २०६४ चैत २८ गते नेपालमा प्रथम पटक पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसपछि मधेसी दलहरुमा स्खलन प्रारम्भ भयो । यो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी १२० सिटमा बिजयी भएर पहिलो पार्टी भयो भने ३७ सिट ल्याएर नेपाली कांग्रेस दोस्रो, ३३ सिट ल्याएर नेकपा एमाले तेस्रो, मजफो नेपाल ३० सिट ल्याएर चौथो, नौ सिट ल्याएर तमलोपा पाँचौ र चार सिट ल्याएर सदभावना पार्टी छैठौं पार्टी बन्न पुग्यो । अझ भन्नु पर्दा तीन मधेसवादी दलको कुल संख्या संविधानसभामा ४३ थियो । जुन दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भन्दा ६ सिट बढी थियो । तीन वटै मधेसी दलको मुद्धा र उद्देश्य एउटै थियो, उनीहरुले यसलाई स्थापित गराउन तीन वटै प्रमुख दललाई बाध्य पार्न सक्थे । तर तीन वटै मधेसवादी दल सत्ताको भासमा भासिन पुगे । उनीहरुले सत्ताको मोह त्याग्न सक्नेनन् । सत्ता, सम्पती र शक्तिको मोहमा तीनवटै दलका नेताहरु यति अन्धा भए कि उनीहरुले जुन पार्टीबाट आफू बिजयी भएर आएको हो त्यो पार्टीलाई समेत विभाजन गर्न पछि परेनन् ।
पहिलो संविधानसभामै मधेसवादी दलमा विभाजन प्रारम्भ भयो । दुई दुई वटा मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने उपेन्द्र यादवको मजोफो नेपाल नै विभाजित हुन पुग्यो । सर्व प्रथम मजफोबाट भाग्यनाथ गुप्ता अलग भएर मजफो मधेस गठन गरे । त्यसपछि विजय कुमार गच्छेदार अलग भएर मजफो लोकतान्त्रिक गठन गरे । गच्छेदारबाट अलग भएर जयप्रकाश गुप्ताले मजफो गणतान्त्रिक, शरदसिंह भण्डारी अलग भएर तराई मधेस समाजवादी पाटी र सन्जय साह अलग भएर मजफो क्रान्तिकारी गठन गरे । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा पनि विभाजनको सिकार भयो । तमलोपाबाट अलग भएर महेन्द्र राय यादवले तराई मधेस सदभावना पाटी गठन गरे ।
गज्जु बाबुको निधन भए पछि त सबैभन्दा बढी बिजोग नेसपाको भयो । गज्जु बाबुको निधनपछि पार्टीको नेतृत्व हत्याउन जालझेल र षड्यन्त्रहरु भए । यो पार्टी पनि छिन्नभिन्न भयो । गज्जु बाबुको निधनपछि बनेको नेसपा (आनन्दी देवी) नेतृत्व हत्याउन श्याम सुन्दर गुप्ताले चालेको जालझेल र षड्यन्त्र कसैबाट लुकेको कुरा होइन । कतिसम्म भने पार्टीको नेतृत्व हत्याउन आनन्दी देवीको अपहरणसम्म भए भन्ने समाचार त्यसबेला चर्चाको विषय बनेको थियो । गज्जु बाबुको निधन पश्चात नेसपा पिभाजित भएर नेसपा (रामजनम), नेसपा (बद्री मण्डल), विकास तिवारीको नेसपा (गजेन्द्रवादी), अनिल कुमार झाको संघीय सदभावना पाटी र राजेन्द्र महतोको सदभावना पाटीको रुपमा विभाजित हुन पुगे ।
दोस्रो सविधानसभा निर्वाचन २०७० साल मंसिर ४ गते भयो । यो निर्वाचनमा मधेसी दलहरु फुटेर चुनाव लडे, निर्वाचनमा एक दर्जन जति मधेसी दलहरु होमिएका थिए । निर्वाचनको परिणाम जस्तो सोचेको थियो त्यस्तै आयो अर्थात मधेसी दलहरु नराम्रोसँग पराजित भए । पहिलो संविधानसभाको समयमा सत्ताप्राप्तीका लागि आफ्नै मातृ पाटी फोडेर एकजना सभासद भए पनि मन्त्री बन्न पाइने भएपछि मधेसी दलका नेताहरु व्यक्तिपिच्छे पार्टी बनाएर चुनाव लडे । मजफो नेपाल, मजफो लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सदभावना पाटी थोरै सिटमा भए पनि बिजयी भएर आफ्नो लाज बचाउन सक्यो भने अन्य मधेसी दलबाट तीनका एक एक जना अध्यक्ष मात्र विजयी भए । हास्याश्पद कुरा के छ भने दोस्रो त्रिशंकु सविधानसभामा लाज बचाएका र एउटा मात्र सिट ल्याउने मधेसी दलका नेताहरु पालैपालो मन्त्री बने । जसका कारण यीनले संविधानसभामा मधेस आन्दोलनको माग र मुद्धालाई जोडदार ढंगले उठाउन सकेनन् । यो यस कारणले पनि कि दोस्रो संविधानसभामा मधेसी दलहरुको उपस्थिती कमजोर रह्यो ।
पहिलो संविधानसभाले जस्तै दोस्रो संविधान सभाले पनि नेपाली जनतालाई नेपालको संविधान दिन सक्छ की सक्दैन ? भन्ने प्रश्नका बीच फास्ट ट्रयाकमा संविधान बन्न लाग्यो । फास्ट ट्रयाकमा संविधान बन्न लागेपछि आफ्नो माग संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दै ६ वटा मधेसी दलहरु तमलोपा, फोरम गणतान्त्रिक, तमसपा, रामसपा र रासपा मिलेर एकिकरण गरी सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (सलोममो) बन्यो । सलोममो र मजफो मिलेर २०७२ बैशाख महिनाबाट तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु गरे । जुन आन्दोलन करिव ६ महिनासम्म चल्यो । यो आन्दोलनले ६ वटा मधेसी दललाई एक बनायो । सलोममो पछि गएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि यसको विरोध गर्दै मजफो र राजपाले संविधान जलाए ।
२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि संसदमा संविाधान संशोधन गराउनका लागि दिने अवस्थामा मजफो र राजपाका सांसदहरु बिजयी बनेर पुगेका थिए तर मजफो प्रमुख उपेन्द्र यादवलाई संघ सरकारमा जान हतार भयो । राजपा प्रमुख महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतका शिर्ष नेताहरुले ‘अहिले नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नजाउ पहिले संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्य पारौ, संविधान संशोधन भए पछि मात्र सरकारमा जाउला’ भन्दा भन्दै पनि उपेन्द्र यादवले मानेनन् । सरकारमा रहेर नै संविधान संशोधन गर्नका लागि दबाब दिन सकिन्छ भन्दै यादव ओली सरकारमा सहभागी भए तर राजपा सरकारमा गएन । उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान संशोधन गर्न के दबाब दिन सक्थ्ये र संविधान संशोधनको कुरा उठाउदा उनी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अपमानित भएर बहिर्गमित हुनु प¥यो ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकिकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद र विग्रह सुरु भयो । नेकपामै प्रचण्ड–माधव र प्रधानमन्त्री ओली समूहबीच रहेको विवादले उग्र रुप लिए पछि ओलीले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरे । यही अध्यादेशले संघीय समाजवादी पाटी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई एक बनाइदियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई थाहाँ थियो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको खण्डमा दुवै पाटी फुट्छ । त्यसैले हतारमा दुई पार्टी बीच मध्यरातमा एकता भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ बैशाख ८ गते दल विभाजन अध्यादेश ल्याए भने संघीय समाजवादी पाटी र राजपा २०७८ बैशाख १० गते एकिकरण भयो र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल बन्यो ।
तर, दुई पार्टीको एकिकरण ‘चार दिनकी चाँदनी, फिर अँधेरा’ भन्ने उखान जस्तै हुन पुग्यो । किनभने संविधान संशोधन गराउने भन्दै जसपाकै महन्थ–राजेन्द्र समूह ओली नेतृत्वको सरकारमा जान सहमत भए किनभने मधेस आन्दोलनको मुद्धा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि आफू तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाए । आफूहरुले उठाउँदै आएको माग र मद्धा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको हुँदा आफूहरु सरकारमा जान कुनै आपती नरहेको ठाकुर–महतोले भनेपछि जसपामा विवाद सुरु भयो । दुई दुई पटक संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनकारी भएको र ओली नेतृत्वको सरकारमा जसपा जान नहुने भन्दै यादवले विरोध गरेता पनि ठाकुर महतो पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदियो र संसद पुनस्थपना गरिदियो ।
फलतः त्यसको केही दिन पछि नै ओली सरकार ढल्यो र राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ओली सरकारमा गएका जसपाका मन्त्रीहरु पनि सरकारबाट बाहिरनु प¥यो । लगतै कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्न वातावरण सिर्जना भयो । देउवा प्रधानमन्त्री बने लगतै उनले पनि ओलीले ल्याएजस्तै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । उक्त अध्यादेश एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई मध्यनजर गर्दैै ल्याइएको थियो । दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा दल विभाजन सम्बन्धीका प्रावधानहरुलाई हदैसम्मको लचक बनाइदियो । पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैतिर २०÷२० प्रतिशत पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याएपछि माधव कुमार नेपाल पक्षले मात्र नभइ महन्थ ठाकुर पक्षले समेत त्यसको लाभ उठाए । नेता नेपालले नेकपा एकिकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी गठन गरेर आधिकारिता समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
आगमी निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मात्र होमिए हुन्थ्यो नि तर यो सम्भव छैन किनभने आगामी निर्वाचनमा करिब आधा दर्जन मधेसवादी दलहरु चुनाव लड्ने निश्चित छ । यी दुई दलबाहेक तराई मधेसमा राम्रै जनधार रहेको सिके राउतको जनमत पार्टी चुनाव लड्ने छ र मधेसमा प्राभवशाली नेता मानिएका हृदयेश त्रिपाठीले पनि नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यी दलबाहेक पनि अन्य मधेसवादी दलहरु चुनाव लड्ने निश्चित छ । सर्सती हेर्दा आगामी तीन तहको निर्वाचनमा आधा दर्जन बढी मधेसवादी दलहरु निर्वाचनमा होमिने निश्चित छ । यसरी विभाजित हुँदै गएका पार्टीहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ त्यसका लागि आगामी निर्वाचन पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।
(भदौ १८ गते प्रकाशित टुडे एक्सप्रेसको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)
२०७८ माघ ५ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
माघ ५, २०७८, ५:३० AM
२०७८ माघ ४ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
माघ ४, २०७८, ७:२९ AM
२०७८ माघ ३ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
माघ ३, २०७८, ५:४१ AM
२०७८ माघ २ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
माघ २, २०७८, ६:०५ AM
माघ २, २०७८, ५:११ AM
२०७८ माध १ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
माघ १, २०७८, ८:५७ AM
२०७८ पौष ३० टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
पुस ३०, २०७८, ६:०९ AM
२०७८ पौष २९ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
पुस २९, २०७८, ८:४२ AM
२०७८ पौष २८ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
पुस २८, २०७८, ८:०९ AM
२०७८ पौष २७ टुडे एक्सप्रेस, जनकपुरधाम
पुस २७, २०७८, ३:१९ AM